Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo soo gaaray magaalada Muqdisho - Jowhar Somali news Leader
Home News Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo soo gaaray magaalada Muqdisho
Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo soo gaaray magaalada Muqdisho
Madaxweynayaasha Puntland Siciid cabdulaahi Deni iyo Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa si kala gaar gaar ah uga soo degey garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Wufuuda soo gaartay magaalada Muqdisho ayaa waxaa garoonka ku soo dhoweeyay madax ka tirsan dowlada federalka oo uu ka mid yahay Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Cumar maxamuud Maxamed Cumar Filish.
Madaxweynayaasha labada dowlad goboleed ayaa lagu wadaa inay dhowaan si wadajir ah saxaafada ula hadlaan,iyadoo ay tahay markii ugu horeysay ee uu Muqdisho soo gaaro Madaxweyne Axmed Madoobe tan iyo markii loo doortay markii labaad Madaxweynaha Jubbaland. Sidoo kale Madaxweynaha Puntland Saciid Deni ayay tahay markii ugu horeysay ee uu yimaado magaalada Muqdisho tan iyo markii sanadkii hore loo doortay madaxtinimada Maamulka Puntland.
Ujeedka labada madaxweyne ayaa ah sidii ay shir ula qaadan lahayeen Madaxweyne Maxamed cabdullaahi farmaajo, waxaan shirkaasi looga hadli doona arrimo la xariira siyaasadda dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka.